सांसद–मन्त्रि बन्न राजनितिमा नआएको ः डा. राउत
प्रकाशित मितिः चैत्र 30, 2075
54 पटक पढिएको
राम नारायण पण्डित
राम नारायण पंडित, सिरहा, ३० चैत । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सांसद–मन्त्रि बन्न राजनितिमा नआएको बताएका छन् । जनताको सेवा ,समाजिक जिम्मेबारी र समाजमा रहेको फोहोर सफा गर्न राजनितिमा होमिएको दाबी गरेका छन् । सरकारसंग सम्झौता पश्चात पहिलो पटक सिरहाको मिर्चैयामा आज आयोजित विशाल बिजय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजिक जिम्मेबारी र जनताको अधिकारका लागि राजनितिमा आएको बताए ।
उनले जनमत पार्टी आएपछि मधेशी जनताको मतलाई भजाएर ठेकापटा गरिरहेका दलका नेताहरुको पसल बन्द हुन लागेको बताएका छन् । सरकारसंग सम्झौता गरे पश्चात केहि तत्वले आफ्नो दुकान बन्द हुने डरले भ्रम फैलाउन थालेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, “कसैको पसल, कसैको ठेकेदारी र रोजीरोटी बन्द हुन लागेको छ, त्यसैले उनीहरु जनतामा भ्रम फैलाउँदै हिडेका छन् ।”
केहि व्यक्तिले डा. राउतले सरकारसंग सम्झौता गरी पछाडी हटेको अफवाह फैलाउदै हिडेको भन्दै उनले आफु सरकारसंग सम्झौता गरेर पछाडी नभई छलांग मारेको बताए । सरकारसंग १० महिना लामो छलफल गरी सम्झौता गरेको भन्दै उनले समभmौताको ड्राफ्ट तयार गर्न सरकारलाई २ महिना लागेको स्पष्ट गरे । केपी ओलीसंग नभई नेपाल सरकारसंग आफु सम्झौता गरेको भन्दै उनले सम्झौता गरेर विजयी हासिल गरेको दावी गरे ।
अहिलेसम्म कुनै पनि मधेशी पार्टीका अध्यक्षले जेलमा बसेन तर आफुचाँही मधेशीको अधिकारका लागि पटक–पटक प्रहरी हिरासत र जेलमा बसेको सुनाए । जो पार्टी ओलीको बिरोधमा भोट माँगे उक्त पार्टीले अहिलेसंगे हनिमुन मनाईरहेको भन्दै डा. राउतले आक्रोश ब्यक्त गरे ।
विगतमा भएको चुनावमा नो भोट अभियानको क्रममा जनताले चुनाव चिन्हको माँग गरेकोले जनताको अपेक्षा अनुसार पार्टी निर्माण गरिएको उनले जिकिर गरे । उनले मधेसी जनताको अधिकारका लागि आफु ज्यान दिन तयार रहेको बताए । अधिकारका लागि कफन लिएर हिडे्को भन्दै उनले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धको लक्ष्य पुरा गर्न अघि बढिरेहेको थपे । सम्बोधनको क्रममा डा. राउतले मधेशबादी दलप्रति आक्रोशित देखिएको थियो ।
मधेशमा १० लाख राजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने समेत उनले दाबी गरे । पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजकुमार त्यागीको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा हजारौको संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
राज्यमन्त्रीले नै गराईदिए दलितको वालविवाह
बैशाख	11, 2076
आलोक यादव लाहान, ११ बैशाख । प्रदेश दुई सरकारले चलाएको बेटि पढाउ , बेटि बचाउ अभियानलाई सरकारकै एक राज्यमन्त�
मिर्चैयमा पहिलो पटक फैसन शो ईभेन्ट भव्यताका साथ सम्पन्न
राम नारायण पंडित, सिरहा, ११ बैशाख । सिरहाको मिर्चैयामा पहिलो पटक फेशन फेस्ट शो एण्ड म्युजिकल ईभेन्ट सम्पन्
लहानको दरबारले पाए टुस्टारको दर्जा
बैशाख	10, 2076
नवसंग्राम दैनिक लहान १० बैशाख । दूई बर्षमा लहानको दरबार होटलले दूई तारा अर्थात टुस्टारको फुली प्राप्त गर�
आलोक यादव लाहान, ११ बैशाख । प्रदेश दुई सरकारले चला�... ... ...
राम नारायण पंडित, सिरहा, ११ बैशाख । सिरहाको मिर्चै�... ... ...
लहान नगरपालिका विरुद्ध झाडु प्रदर्शन, बीच बस्तीमै दुर्गन्ध
नवसंग्राम दैनिक लहान , १० बैशाख । लहान नगरपालिका व�... ... ...
९० बर्षीया वायोवृद्धसहित दर्जनौ रक्तामय, मिर्चैया प्रहरीको नजरमा समान्य घटना
कार्तिक 2, 2075
नवसंग्राम दैनिक । रेडियो सौगात लहान, २ कात्तिक । स�... ... ...
सिरहामा खुलेयाम लिङ्ग परिकक्षण, नियमनकारी निकाय मौन
बैशाख	24, 2075
बैशाख २४ । सिरहामा क्लिनिकहरु खुलेयाम रुपमा लिंग �... ... ...
मधेसका असल राजनेता हुन मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत
बैशाख	30, 2075
वैशाख ३० । नेपालका कैयौं न्युज च्यानेलहरु अहि�... ... ...
Copyright © 2019 - Sirahatimes.com All rights reserved
Hosted on - Prabhu Host